Ihe kpatara eji eji Igwefoto ese foto nwere ike ọ gaghị ekpocha ihe - OMG Solutions
Footkwụ sitere na igwefoto ahụ nwere ahụ wee nwee ike idozi nsogbu ọ bụla, sitere na; na-ekwupụta na ndị uwe ojii na-ebo ebubo nke imejọ ha, ikpe ha esighi na imezi ihe ndị uwe ojii na-eme mgbe ha na-eche nche. Nkwenye n'ozuzu ya na eserese sitere na igwefoto ahụ na-eyi ga-egosi ihe niile mere mgbe enwere ihe dị oke mkpa metụtara ndị uwe ojii na ndị nkịtị. Site na iji igwefoto ahụ mmadụ meworo ka ọ dị mfe igbochi ojiji nke ndị ọrụ uwe ojii, ike a na-ekerịta echiche a; ngalaba ndị uwe ojii, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nnwere onwe obodo na ọtụtụ ndị mmadụ. Isi na - enweta nkwado site na nnukwu mmadụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na - agaghị eme ya. Olile anya igwefoto ahu bu ihe n’iru n’ihu ikpughe esemokwu di n’etiti ndi uwe ojii na ndi amaala nke mechara buru ihe ma obu nke nwute. Olile anya a emeela ka gọọmentị wepụta nde kwuru nde kamera ma hụkwa ebe niile.
Ọ bụ ihe dị mma ka ndị mmadụ tụkwasị obi n'ihe ha hụrụ ma nwee ike ịghọta ya mere iwere esemokwu vidiyo esemokwu na mmekọrịta dị n'etiti ụmụ amaala na ndị uwe ojii abụrụla ihe dị mkpa. Nchoputa egosiputala ufodu ihe ndi n’eme ka ihe eji akpo ntu nke aru ghara ikwenye ekwenye. Anyị ga-eleba anya na ha.
Ihe ndọghachi azụ bụ ngwụsị nke teknụzụ, ihe si na igwefoto ahụ na-enye echiche elele nke otu ihe ọghọm dị. Ihe ndị mmadụ na - ahụkarị apụtachaghị nke ọma naanị ị ga - ahụ ebe ị na-etinye igwefoto. Ihe ndenye a nwere ike imetụta echiche ahụ, ụfọdụ ihe mgbochi ndị ọzọ nke igwefoto mepụtara bụ ihe mgbochi gburugburu na oghere igwefoto. Nke a pụtara na ihe mgbochi gburugburu nwere ike imerụ ihe a na-ahụ anya, oghere igwefoto nwekwara ike bụrụ nnukwu ndọghachi azụ ma ọ bụrụ na oghere ahụ esighi ike mgbe ahụ vidiyo nwere ike ịma jijiji ma nwee nsogbu ụda. Nke kachasi mkpa bụ na ndị mmadụ na - ahụkarị ụdị mgbanwe dị iche iche kwekọrọ na nkwenye ha. Ihe a mere ama ama ama. Mgbe nke a metụtara usoro ndị uwe ojii, nke a pụtara omume ndị uwe ojii nwere ike imetuta Dịka ọmụmaatụ, mgbe egosipụtara vidiyo nke onye uwe ojii na-arụ ụmụ amaala, a na-arịọ ka elekwasị anya na ndị uwe ojii ebe ọ bụ na ndị kọrọ na ha nwere mmetụta yiri nke ahụ. Onye uwe ojii ma ọ bụ ikekwe ụdị ọnọdụ a. Ha hụrụ na ụdị ndị uwe ojii dị otú a bụ ihe na-enweghị mgbagha. Ndị dị otú ahụ bụkwa ndị na-atụ aro ntaramahụhụ kwesịrị ntaramahụhụ maka onye ọrụ uwe ojii, ma e jiri ya tụnyere ndị na-elekwasị anya na onye ọrụ oge niile. N'ihi ya, mgbe ịtụkwasị ndị uwe ojii obi, ị na -echeta ụkpụrụ ha, ma mgbe ha mere, ị na-ekwenye na omume ha bụ ihe ziri ezi karịa.
Nsogbu ozo di na mkpado igwefoto ahu bu na ndi mmadu gha achoputa mmeghachi omume na akuko a na vidio n’enweghi onye isi n’ime vidiyo a. Ndị mmadụ n'ozuzu ha na-enwe obi ọmịiko na onye a na-enyo enyo karịa mgbe ha na-ekiri vidio, ọtụtụ na-eleghara ọrụ onye ọrụ nyocha ga-ekere na iwepụta ozi na eziokwu. Yabụ oge mgbe ndị uwe ojii na-agba ajụjụ ọnụ ma ebe ọ bụ na ọ na-abụkarị ihe igwefoto na-eduzi onye a na-enyo enyo, ndị mmadụ na-elegharakarị onye nyocha anya na-arụ ọrụ ya iji kwado ikpe ziri ezi ma chekwaa obodo. Kama, ha na-etinyekwu uche na onye a na-enyo enyo na-eche echiche na ụzọ ị ga - esi mee ya, ma ọ bụrụ na ihe ndị a niile emee, ha na - enwe ọmịiko na onye na - enyo enyo na ihe niile anyị maara nwere ike bụrụ ikpe. Site na nke a ọ dị mfe ikwubi na ikiri igwefoto na-elele igwefoto na-enye ozi ndị mmadụ lekwasịrị anya. Otu a ka ọ dịkwa na iji igwefoto ahụ mmadụ ka ndị mmadụ ga-eleghara ọrụ ndị ọrụ uwe ojii kwesịrị ịrụ anya ma lekwasị anya na onye ha hụrụ na vidiyo ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na enwere ọnụnụ gburugburu ma dekọtara ihe ahụ merenụ, ọ nwere ike ịrecha ikpe ahụ dum n'ọhụụ ọhụụ na-eru nkwubi okwu dị iche na ikpe ahụ.
Ghọta ndị mmadụ banyere ndị uwe ojii na-enwe mmetụta dị ukwuu etu ha si ele ha n'ihe nkiri ma ọ bụdị na-emeghachi omume maka vidio vidio banyere ha. Mmadu nwere ike kp o ndi uwe ojii as that nke na mgbe o h footudoro ha na ya, o na-ahuta ihe megide ha ma na-emegidekwa ihe obula ha na eme. Achọpụtara ya na ndị mere ka ndị uwe ojii mata, dịka ndị ikwu ma ọ bụ ọbụna na-arụ ọrụ na ngalaba na-enwekarị ntụkwasị obi ndị uwe ojii ma nwee ike ịdabere na mkpesa ha. Ha na-amakarị ihe ọ bụla na-ahụ na vidiyo vidiyo. Enwere ikpe ebe ndị mmadụ na-agbagha ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ onye ọrụ uwe ojii ahụ chere na ọ hụrụ ka ha na-eji egbe ma ọ bụ mma, ha na-akọ akụkọ ahụ dịka ọ bụ ezie na nwa amaala ahụ na-ejide mma ọ bụ ezie na ọ nweghị mma ma ọ bụ egbe n'ime vidiyo ahụ. Ugbu a ndị na-ele vidiyo ahụ na ndị uwe ojii metụtara ndị uwe ojii na-anwa ịghọta echiche banyere ọnọdụ ahụ dum ma na-akọ banyere ya na akụkọ mkpesa agbagha n'agbanyeghị na ọ nweghị ihe gbasara vidiyo ahụ. Na njedebe, mkpesa ndị ọrụ ahụ rụrụ ọrụ dị ka ihe ọmụma na-eduhie eduhie nke na-eduzi nchọpụta ahụ. Ma nsogbu dị na nkọwa dị otú a bụ na ha siri ezigbo ike idozi, ọbụlagodi mgbe a kọọrọ ndị na-ahụ maka nkọwa na-ezighi ezi yana kọwakwuru ihe mere ọ ji dị njọ.
Mgbe ị na-eleba anya n'okwu ndị a, o nwere naanị azịza dị mfe nke ga - abụ ime ka mmadụ niile mara banyere echiche ha na - eche na ịgbanwe ụdị echiche ha mana ọ bụrụ na anyị maara ya, ọ dị mfe ikwu karịa ime ya. Ndị mmadụ anabataghị mgbanwe ahụ n'ụzọ ha si eche echiche. Enwere ụfọdụ isi ihe dị mkpa nke ekwesịrị ịkọwa iji nyere aka mara na igwefoto ahụ abụghị ihe zuru oke ma ghara iwepụcha ihe niile, ha bụ:
Ndị kamera anaghị eso ijegharị anya, ha na-ele naanị ebe a na-etinye ha. Ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na i lepụ anya n’ebe ị na-ele, igwefoto nwere ike ghara ịnweghara ihe dị mma n’ihu gị.
Igwefoto ahụ na-agba ume ịkọwapụta nke abụọ, n'okpuru ọnọdụ dị jụụ na ntụsara ahụ ndị mmadụ nwere ike igwu egwu egwuregwu shoulda, ha nwere ike igwu egwu egwuregwu ọtụtụ oge wee bido imeghari ahụ wee kwụsịtụ ma bulie ebe ị ga-etinye ya na nyocha ha.
Ọnụnọ oge iheomume na ihe onyonyo vidiyo nwere ike sie ike mgbe ị na-abanye, ọ dị mkpa na enwere oge na vidiyo dịka ọ na - enyere aka nyocha na ntinye. Vidio na-enweghị timestamp nwere ike ịbụ ihe na-eduhie eduhie.
Otu igwefoto nwere ike ọ gaghị ezu iji kpochapụ nyocha mgbe ọ na-ekpe ikpe akụkụ, ọkụ gburugburu na ọtụtụ ihe igwefoto ndị ọzọ. N'ọnọdụ metụtara ọgụ, otu igwefoto nwere ike ime ka ihe edoghị anya.
Ahụ onye na-edekọ ihe nwere ike igbochi ihe a na-elele, ị nwere ike ịgbanye egbe ma ọ bụ Taser na igwefoto ahụ agaghị enwe ike ịhụ na ihe niile a ga-ahụ bụ naanị ogwe aka gị gbatịrị. Ihe ndị a na-egbochi onye na-enyocha ya inwe ezi mkpebi.
Igwefoto nwere oke ikiri naanị nha 2, n'ihi enweghị igwefoto ịdekọ omimi nke anya mmadụ na-eme nke ọma, na-ekpe ikpe ịdị anya n'usoro nwere ike ịbụ ihe agaghị ekwe omume.
Cameradị igwefoto ọsọ ọsọ dị iche, igwefoto na-enwe ike idekọ ihe ọsọ ọsọ karịa igwefoto ụlọ ahịa nkịtị ma ọ bụ ọbụna igwefoto emechiri emechi. Ọ ga-ekwe omume tufuo ụfọdụ ihe dị oke mkpa na mbadamba ngwa ngwa a dịka ha ga-apụta na ngwaọrụ ndị ahụ.
Udiri ihe egwu di nkpa enweghị ike iji igwefoto dee ihe, “ihe nlere ahu di nkpa” nke dicha ezi nkpa ndi uwe ojii ma ha choputa udiri ike iji mee ihe abughi ihe nwude ya. Ezigbo ihe omuma atu bu obi uto a, onye uwe ojii puru igosi ma onye mmadu enwete ya ga enuputa ime ihe mana nke ahu aghaghi ihu ya na igwefoto ebe obu na aru ya.
Ndi Cameras ka odi nma karie ka ndi mmadu na - eme n'okpuru onodu oku di ala, onye okacha mara nwere ihe o gha eme n’abali ma eleghi anya isi n’ala mmiri ma obu ebe ochichi buru oke ebe onye ahuru enyo na - acho ijide ya. Jiri nwayọ mana onye a na-enyo enyo nwere ike ijide ekwentị ma onye uwe ojii na-enweghị ike ịhụ nke ọma nwere ike ịghọta na ọ bụ egbe ma gbaa. Ozugbo enyochaa ya ma emechaa ọhụhụ ka ọ bụrụ ekwentị ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya.
Site n'ihe ndị a niile, ọ na-abụrụ nnọọ nkwubi okwu; ịnwe igwefoto ahụ nwere eyi anaghị ehichapu ihe niile, ihe osise nwere ike ịdị mgbagwoju anya, ọbụnadị ụfọdụ anaghị anabata ya. Okwu ndị a na-agbadata mgbe niile ma na-akpata ọgba aghara na ngalaba ụfọdụ na ihe a ga-eme n'ọnọdụ ụfọdụ mgbe ụfọdụ ha na-ejedebe na-eche. N’oge ndị ọzọ, ha na-eme mkpebi nwere ike ịdị mma ma ọ bụ na-ezighi ezi.
Nzuzo 6463 4 Echiche Taa